छापे एरे - प्रणाली को पढ्ने / लेख्ने गति र विश्वसनीयता समस्या सुलझाने
छापे एरे - च्यानलहरू एक पर्याप्त उच्च गति मा सञ्चालन गरेर परस्पर छन् जो धेरै परस्पर स्वतन्त्र ड्राइव छ। प्रणाली एकल रूपमा यो सहमतिलाई लिन्छ डिस्क एरे। प्रक्रिया पढाइको वितरण व्यवस्थापन गर्न र लेखन नियन्त्रक गरेको छ।
छापे एरे डिस्क भण्डारण रेकर्डिङ गति वा विश्वसनीयता विस्तार गर्ने क्रममा प्रयोग गरिन्छ। यी मुद्दाहरूको समाधान एकदम सम्पूर्ण प्रणाली को समग्र दक्षता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरुमा, RAID-एरे सिर्जना सस्तो डिस्क को एकत्र समावेश छ। स्पष्ट शीर्षक प्रतिबिम्बित यो पहल (एक संक्षिप्त अर्थ निम्न: "सस्तो डिस्क को अनावश्यक एरे")। तर त्यसपछि, यो प्रविधि एक गुणवत्ता र विश्वसनीय, कायापलट साबित भयो। आधुनिक छापे एरे एकदम महंगा उपकरण को आधारमा नियम बनाएको छ। (अब "स्वतन्त्र डिस्क को अनावश्यक एरे" को लागि खडा छ) यो, बारी मा, फेरि शीर्षक प्रतिबिम्बित गरिएको छ।
एक जानकारी समाज विकास कडा हार्डवेयर अगाडी राख्नु छन् भनेर आवश्यकताहरु, डाटा स्टोर सहित प्रभावित। तसर्थ, रूपमा लामो छापे-एरे सिर्जना गरिएको थियो रूपमा, त्यहाँ विशिष्ट compartmentalized कार्यहरू सम्बोधन गर्न विकास जो धेरै फरक podtehnology, गरिएको छ।
कम्प्युटर द्वारा हल समस्या सबै किसिम प्रविधि समाधान को रूपमा धेरै विविधता आवश्यक छ। प्रकार छापे arrays:
RAID-0। साधारण कार्यान्वयन दुई ड्राइव आवश्यक छ। आ रेकर्डिङ एकाइ जानकारी दुवै ड्राइव मा उत्तेजित गर्दछ। पढाइ उल्टो प्रक्रिया समावेश छ। यो एकदम रेकर्ड गति, तर डिस्क को एक मा त्रुटि सम्पूर्ण एरे मा डाटा को हानि गर्न जान्छ किनभने, पर्याप्त विश्वसनीयता प्रदान गर्दैन।
RAID-1। साधारण कार्यान्वयन दुई ड्राइव आवश्यक छ। जानकारी पूर्ण उनीहरूसँग लिपिबद्ध डिस्क मा प्रदान। यो तल रेकर्डिङ प्रक्रिया slows, तर कारण निरपेक्ष अतिरेक विश्वसनीयता को एक उच्च स्तर प्रदान गर्दछ। यो विकास को मुख्य लाभ - उच्च उपलब्धता र छिटो पढ्ने (दुई ड्राइव साथ पढ्न सम्भव छ किनभने)।
RAID 5। एक दोष-सहिष्णु एरे। साधारण कार्यान्वयन, तपाईंले तीन डिस्क हुनुपर्छ। कुनै पनि जानकारी रेकर्डिङ गर्न तोकिएको छ प्रत्येक जो ब्लक, मा डाटा प्रवाह तोडने द्वारा हुन्छ यो चेकसम। यस डिस्क को एक डेटा हानि को घटना मा, तपाईँ तिनीहरूलाई अन्य लिपिबद्ध checksums प्रयोग पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। रिकभरी एक ठूलो क्षमता को निर्धारण आवश्यक छ, त्यसैले यो कार्यान्वयन अधिकांश सर्भर हार्डवेयर मा प्रयोग गरिन्छ।
छापे एरे पाँचौं बोध सबै भन्दा साधारण छ। यो आफ्नो विश्वसनीयता र उच्च गति कारण हो , जानकारी प्रशोधन एक एरे बाहिर एक साथ धेरै स्वतन्त्र प्रक्रियाहरू लगे सकिन्छ देखि रेकर्ड र पढेर जानकारी।
कम्प्युटरमा के छ?
Wi-Fi पहुँच कसरी कुरा गरौं
हेडफोन Sennheiser HD 598: एक नक्कली कसरी भेद गर्न?
प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण को एक माध्यम रूपमा औंठाछाप स्क्यानर
चिसो appetizer जन्मदिन। व्यञ्जनहरु को एक चयन
एक पीडीए के हो? म एक पीडीए किन चाहिन्छ?
Numerology पाइथागोरस - संख्या र तथ्याङ्कले जादु
कनेक्टर। एसी पावर प्लग र सकेट
एक खेल सबैलाई zatrollit कि - "Trollfeys" कसरी पारित गर्न?
हामी बिल्ली को बच्चा आँखा fester? के गर्ने? व्यवहार!